Puntland oo Ciidankeeda Badda geyneysa Beyle si ay ula dagaalamaan Burcada badda – SBC
Puntland oo Ciidankeeda Badda geyneysa Beyle si ay ula dagaalamaan Burcada badda
Wasiirka Amniga Dowlada Puntland Khaliif Ciise Mudan ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan ciidamada Bada ee Puntland loo diri doono Degmooyin ay ka mid tahay Bandar beyla oo uu dhowaan Kormeer shaqo ku tagay.
Ciidamada badda ee Puntland ayaa uu sheegay Wasiirku in ay u diri doonaan deegaanka Bandarbeyla ee gobolkaasi Karkaar si ay ula dagaalamayaan kooxaha Burcad badeeda ah oo xiliyada qaar gaadiidka ay soo qafaashaan damca in ay keenaan xeebaha deegaanada Puntland.
Wasiirka Amniga Puntland oo la hadlayay barnaamijka Xulka Wararka SBC ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay uu kula soo kulmay safar shaqo oo ku aadanaa u kuurgalka Xaaladaha Amaan oo uu ku tagay deegaano ka kala tirsan Gobolada Bari iyo Karkaar.
Waxa uu wasiirku sheegay in intii ay safarkooda shaqo ku guda jireen in ay soo mareen degaanada Bandarbeyla, Dhuudo, Dhuur ayna halkaasi kula kulmeen shacabweynaha masuuliyiinta deegaanadaas ayna ka kala warqaateen xaaladaha Amaan iyo waxyaabaha ka dhiman ee amaanka ku saabsan, una soo sameeyeen balanqaadyo buuxa.
Sikastaba ha ahaatee Dowlada Puntland gaar ahaan wasaarada Amniga Puntland ayaa sheegtay in amaanka deegaanada Puntland ay siweyn wax uga qabaneyso ayna jiraan qorshayaal iminka u degsan wasaarada oo ay ka mid yihiin in ciidamo badda ah ay tagaan Bandarbeyla si ay uga fuliyaan howlo burcad badeed la dagaalan ah.
Eyl ma la naasnuuji
Dadaala alah ha idin la garab galo walaalayal